Qaar Ka Mid Ah Qeybaha Bulshada Oo Si Diiran U soo Dhaweeyay Go’aanadii Ka Soo Baxay Shirweyinihii Waxbarashada | Radio Muqdisho
Qaar Ka Mid Ah Qeybaha Bulshada Oo Si Diiran U soo Dhaweeyay Go’aanadii Ka Soo Baxay Shirweyinihii Waxbarashada
Published on June 22, 2013 by Mowliid · No Comments · 1,065 views
Qeybaha kala duwan ee Bulshada Soomaaliyeed ayaa si diirran usoo dhaweeyay Warmurtiyeedkii ka soo baxay Shirweynihii Qaran ee looga hadlayay dib u qaabeynta iyo tayeeynta Waxbarashada dalka.
Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolkan Banaadir oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa si isku mid ah usoo dhaweeyay dadaalka dowladu ugu jirtu horumarinta waxbarashada dalka iyo shirweynuhii Qaran ee waxbarashada oo dhawaan lagu soo gebagebeeyay Muqdisho.
Dadkan ayaa ku booriyay dowlada iney sii waddo dadaalada ay ku horumarineyso waxbarashada soona celiso waxbarashadii lacag la’aanta aheyd iyo manhajkii mideysnaa ee dalka, waxeyna hoosta ka xariiqeen in ay dowlada ku taageerayaan arrintaasi.
Sidoo kale dadkani ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in horumarinta waxbarashadu ay gacan ka geysandoonto xasilinta amaanka maadaama dhalinyaro badan la marin habaabiyay waxbarasho la’aan.
Arrintani ayaa imaaneysa xilli dowlada Federaalka Soomaaliya ay waddo dadaallo ay dib ugu soo celineyso adeegyadii waxbarashada kuna mideyneyso manaahijta waxbarashada dalka iyadoo qabatay shirweyne Qaran oo looga hadlayay waxbarashada dalka.